DHAGAYSO+NAXDIN:Askar lagu gawracay furimaha hore ee dagaalka & Nabadoono dhagta dhiiga loo daray xili…. – Puntlandtimes
DHAGAYSO+NAXDIN:Askar lagu gawracay furimaha hore ee dagaalka & Nabadoono dhagta dhiiga loo daray xili….
BALAD XAAWO(P-TIMES)- Askartan ayaa weerar ku qaaday Al-shabab waxa ayna wararku sheegayaan in ay isku hayb ahaayeen nabadoon dhawaan lagu gawraca Balad Xaawo gobalka Gedo. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO
5 Kamid ah askarlaasi ayaa dagaal ku naf waayey halka afar kalena ay Al-shabaab gawraceen.
Cali Yacquub oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Baar Dheere ayaa Puntlandtimes.com uga waramay arimahaasi.
Khaliif Faarax Warsame says:
Kooxda Nabar iyo Naxdin fashil fashil xigo ay usbuuc walbo keenaan mahaane wax jira mahaan. Qarax joogto ah, qaraajinta masuuliyiinta joogto ah, musuqmaasuq joogto ah, boob, dil, dhac, ayaa nabar iyo naxdin caan ku yahiin.
Hade koox saas ah ayaga ciriir ku jiraan ayaa waxa keliyata ay ka shaqaynahayaan ay tahay burburinta Dowlada Puntland, mana ahaan mid Soomali raali ka tahay in meesha keliyaata nabadoon Somalia ay kooxda nabar iyo naxdin uu adeegsadaan lacagta ummada Soomaaliyeed siay uu burburshaan Puntland.
UN-ka iyo World Bank waxa ka dalbanahayna in lacagta laga joojiyo kooxda nabar iyo naxdin maxa yeelay Puntland ma uu dulqaadanahayso lacagta magaca ummada Soomaliyeed lagu hekay loo isticmaalo duminta Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed. Fashilka kooxda nabar iyo naxdin iyo khayrlaawe iyo Farmaajo ma ahaan in carrada ay ka qabaan fashilka ka aargoostaan Puntland Jubbaland Koonfur Galbeed.
Gubista suuqa Bakaaraha// qaraxa Zoobe/
Dhiibista Qalbidhagax ./ Ku faanay laba nin xabashi af-xabashu ku hadloya dhexdood ayaa la ii fariiisiyay /Khiyaanay Turkiga
Nabar iyo naxdin fashil waaye fashil